April 20, 2018 – Ilo xog-ogaal ah aya u xaqiijiyay in RW Xasan Cali Kheyre uu amar ku bixiyay in albaabada loo xiro idaacado dhowr ah madax bannaan, Ila wareedyada aya Muqdisho Online u sheegay in uu socdo qorsho in dhaweydba socday in la albaabada loo xiro saxaafadda aanan ku hadlin afka xukuumadda iyado RW Kheyre iyo Fahad Yaasiin ay amar ku bixiyeen idaacado dhowr ah in albaabada loo laabo, kuwaaso ay ka mid yihiin Radiyaha iyo TVga Goobjoog, iyado lagu eedeeyay in ay qeyb weyn ku lahayeen kicinta shacabka iyo buunbuuninta waxa uu ugu yeeray falal qaran dumis ah. Xogta aya sheegeysa in Xeer ilaaliyaha Qaranka lagu wado in uu dhawaan soo saaro amaradii lagu xiri lahaa idaacado dhowr ah oo Goobjoog ay ugu horreeyso.
Mudane R/Wasaare IS CASIL si uu Dalka u Badbaado.
Mudane Waa Dhab siyaasadda waa doodo iyo aragtiyo kala duman oo barnaamijyo xambaarsan. doodahaas oo dhexmara siyaasiyiin u dhashay dalka ay dantiisa ka murmayaan inta badan inuu midba kan kale kaga haboon yahay, laakiin siyaasadda runta ah waa tan dadkaaga Saameneysa marka aad fuliso iyo marka aad fulinweyso. Haddaba cidi ma ilooobi doonto wixii kuu qabsamay haddii aad si Sharaf leh aad uga tagtid, balsa cidna ma xusuusan doonto haddii meesha xoog ama Sharci lagaag tuuro.
Read More:Mudane R/Wasaare IS CASIL si uu Dalka u Badbaado
March 31, 2018 – “coup d’état is sudden defeat of a government through illegal force by a small group, often a military one” Afgambi waa la wareegid lama filaan ah oo xukuumadda ah iyada oo loo marayo adeegsiga awood sharci darro ah, oo ay sameyso koox yar (sida laanta Fulinta), ama badanaa ciidamada Milateriga. Haddaba sida caalamka looga yaqaanno Afagambi ama inqilaab waa qeexidda kor ku qoran oo ah qeexidda ay isku raacsan yihiin dunida.
Maanta haddii laanta fulinta (Xukuumadda) oo aadeegsaneysa lacag, laaluush, Ballanqaad, iyo awood ciidan ay laanta sharcidejinta (Barlamanka) la wareegto waa Inqilaab cad. Waxaa la hubaa in tani ay ka dhalan doonto cawaaqib xumo aad u weyn.
Antitribalism – Qabiil iyo qabyaalad waa laba erey oo siyaasiyiin badani rumeysan yihiin in macne ahaan la isku beddelan karo. Kan hore waa dad isku oday ku abtirsada – ha noqdo mid dhab ah ama mid male-awaal ku salaysan. Qabyaaladdu waa u adeegsiga awoodda siyaasadeed si sharci-darro ah si xaqa qof ama dad loo duudsiiyo ama si qof loogu eexdo siyaasad ama dhaqaale ahaan. Dadka qabiilka ka tirsani wax may ka wada dheefaan qabyaaladda hase ahaatee badankood iyaga oo aan is ogayn way suurtowdaa inay adeegsiga qabyaalad taageeraan. Maxaa ku qasba qofka inuu taageero adeegsiga qabyaalad uu dhibbane u yahay? Read the rest of this entry →
Antitribalism – In badan ayaa laga hadlaa qabiilka iyo dhibaatooyinka , uu u leeyahay ummaddeenna. Marar badan waxaa la sheegaa in qabiilku naga horjoogsadey horumarkii ummaddu tiigsan lahayd,laakin marna leysma weydiiyo sababta ay dad badani ugu dheggan yihiin qabyaaladda,iyagoo malaha,u arkaya iney ku heystaan faa’idooyin (haba yaraadeene) eeyan meel kale ka heleyn.Markaa,ayaan jecleystay inaan labo nin oo u kula hadlaya qabiilka waxtarkiisa iyo in Dawladnimo ka roon tahay qabiilka lagu dheggan yahay, inaan dooddooda idiin soo gudbiyo.
Midka u hadlaya qabiilka iyo nacfiga lagu heysto waxaa lagu magacaabaa jaalle CALI BOOTOOLE, kan kale oo leh waxa habboon tahay in habka Dawladnimada la xoojiyo, waxa la yiraahdaa Jaalle CUMAR SANBUUR, bal marka ila akhriya arrintan.(Fiiro gaara, dooddani ma aha fadhi ku dirir, ee waa mid cilmiyeysan, magacyada nimanka matalayaana waa kuwo malo-awaal ah)!! Read the rest of this entry →
September 22, 2017 –Antitribalism Labada qabiil mid waa dad caqli badan, dulqaad badan, qurux badan, waase dad isku darsaday bakhiilnimo, fulaynimo iyo jaahilnimo. abiilka kale waa waxaa dilootay aqoonyari, gacan-adayg, fulaynimo, waase dad u dhashay garaad, qurux iyo dulqaad. Read the rest of this entry →
African-Geostrategy Institute for Social Research – Bar AMA Baro – Qormadan, waxaan ugu magacdaray, heesta kooxda Qeylodhaam: “Xildhibaanimooy xaal qaado” oo anigu runtii aan aad uga helay, gaar ahaan iyo guud ahaan heesaha kooxdan, maadama ay ku soo beegmeen, xilli aad u xassaasi ah. Waa kooxdii labaad, oo nooceeda ah ee Soomaaliyeed ee samaysanta. Sanado ka hor, waxaan si fiican uga wada dharagnay, heesaha baraarujinta kooxda caan baxday, ee “Waayahacusub”, oo heeso wacyogalin ah dadka ku harqisay, xilli iyana loo baahnaa.
‘Read More: Xildhibaanimooy Xaal qaado!
XOG: Gaas oo dejiyay dhisme ku kacay hal-milyan oo doollar oo uu ka iibsaday dalka Itoobiya, marwadiisa labaad ee uu dhowaan guursaday oo reer Soomaaliland ah. Read the rest of this entry →
The Nation of Poets – Maalmahan waxaa xawli ku socda dhaqanxumo siyaasadeed, oo ay hormuud ka yihiin hoggaanka cusub ee uu dalku yeeshay doorashadii 8 feberaayo.
Read More : Qeyrrow bal qajil!
2017 SANADKI SOMALIYA XIJAABATAY (Qormo aqriste)
GREATER SOMALIA HalgankiiXisbigaSYL – 04/05/2017 – Saansanta muuqata hadda waxay calaamad u tahay in la soo gaaray xilligii geerida Somaliya. Muddo badan ayey sakaraad ahayd Somaliya oo weliba mararka qaarkod la mooday inay nafti ka baxday laakin la arkay iyadoo neefsaneysa. Waxaa laga cabsaday haddii iyadoo aan geerida la hubin la aaso radi-ficilka ka imaan kara dadweynaha ku abtirsada qaarkood…sidaas ayaa muddo aan yareyn dib loogu dhigaayay in maruun laga takhaluso, si ay uga nabadgalaan dalalka deriska la ah oo mar kasta qaba tuhun ah inaan Somalida laysku aamini karin. Kheyraadka dhulkoda ku jirana aan si sahlan loo hor-istaagi karin ama lala bixi karin haddaan masiirkooda meel lagu ogaan.!!!
Aqoonsiga caalamiga ah kadib maxaa ka dhiman xornimada Soomalia?
Greater Somalia – Moment History Society – Tan iyo 1960kii oo ahayd markii ay soomaaliya madaxbanaanida ka qaadatay gumeysteyaashii reer yurub ee Boqortooyadda Ingiriiska iyo Tanyaaniga, wuxuu dalku soo maray marxalado iyo daruufo siyaasadeed dhaqaale iyo amaan oo aad u kala duwanaa. Qormadaan ayaa si gooni diiradda u saareysaa su’aasha ah Soomaaliyada maanta ma xorbaa mise maahan? Maadaama soomaaliya ay ka baxday ku xiligii meelgaarka ayna u gudubtay dowlad rasmi ah oo caalamka la saxiixan karto heshiisyo caalami ah, waxay Qormadaani si kooban u eegeysaa waxyaalaha asaasiga u ah xoriyadda iyo madaxbaanida dal uu ku naaloon karo. Qormadu waxaa soo qaadaneysaa 10 tiir oo lagama marmaan u ah jirintaanka iyo ilaalinta xoriyadda. Qormadu waxay ku soo gabagaboobeysaa dhowr su’aalood oo ay jawaabahooda u madaxbanaan yihiin akhristeyaashu!!
Politico Magazine NEWS / April 26, 2017 – Aad baan ugu farxay, ogaalka socdaalka MW ku tagayo dalka Turkiga, oo ka mid ahaa wararka aan muddaba u dhagataagayey. Runtase farxadda waxaa iigu lammaansaneed weydiimo iyo waxoogaa yaroo walaac ah.
Waydiimaha in aadan igu la yaabayn waan filaa, ee aad is leedihiin, maxaa walaaca kuugu wacan, haddiiba wax aad hamminaysay la hirgalinyo? Sax. Wax walaaca iigu wacan, in aan ka cabsiqabo, in sidii shalay kanshooyin badan loo lunshay, in mar kale la lunsho.
Marka hore, HOGGAAMIYAHA iyo shacabka Turkiga naga wada gaarsii salaan, mahdin iyo bogaadin walaalnimo, una sheeg, in aan abaal badan, oo weyn u haynno mar iyo marxalad walba.
Ka dib, waxaa i la habboon, in wadahadalka la la galayo Turkiga iyo heshiisyada la la galayo aysan ka marnaan qodobbadan hoose; Read the rest of this entry →
“Maxaadan Ogeyn oo laga filan karaa booqashada MD Farmaajo ee Turkiga?”
Politico Magazine NEWS / April 26, 2017 – Murti baa leh: “Abaal raag rag baa leh” mid kalana waxay leedahay: “Ruuxii abaalgala waa loo gudaa” mid ka agdhaw ayaa tiraa: “Abaal qof galaa badan, qof gudaase yar” mid kale ayaa dhahda: “Abaal laawe waa Eebbe laawe!” Mid kalana waxay leedahay: “Abaal ha tirsan, haddaan laguu tirin”. Read the rest of this entry →
Faallo-(Moment Research & Consultancy) Waxaa maanta ii farxad ah in marka hore aan hambalyo iyo boogaadin ba halkaani uga dirayaa dhamaan ummadda soomaaliyeed meel kast oo ay joogaan, maanta oo ah sannad guuradii 74aad ee ka soo wareegta xisbigii gobanima doonka ahaa ee S.Y.L 15 May 1943, taasoo ku soo begantay in maanta shacabka soomaaliyeed ay u dhaltay dawlad aan ku meel gaar ahayn , 74 sanno ka dib waxaan ilaahay ka baryeena in ay dib u soo noqoto heybaddii qaranimo iyo sharaftii calanka soomaaliyeed horay u lahaan jiray.
Runtii taariikhdu ma duugowdo, waxaana loo baahan yahay in laga faaiideysto maanta oo ah sannad guuradii 74aad xisbigii S.Y.L. ee koonfurta soomaaliya halgankaasi oo bar bar socoday xisbigii gobanimadoonka SNL ee waqooyiga soomaaliya waana maalin weyn oo aan la ilaabi Karin.
Haddii aan si kooban u xuso, marka hore waxaa la sameeyey urur ay ku kulman dhallinyarada oo la magic baxay SYC (Somali Youth Club) kaasoo ahaa urur aan siyaasi ahayn
Halkaasoo ay ku kulmi jireen dhallinyaradda iyo wax garadka soomaliyeed.
Ururka SYC muddo ka dib wuxuu noqday urur siyaasi ah oo la magac baxay S.Y.L waxaa na dhidhibadda loo dhigay taariikhda marka ay ahayd 15.05.1943kii oo ay ku kulmeen dhallin yaro ka kooban 13 ah , kuwaasoo ahaa dhallinyaraddii fahmay dhibaatooyinka iyo hagar daamadda gumeysiga.
Ururkaani hadafkiisii ugu weyn wuxuu ahaa in shacabka soomaaliyeed la gaarsiyo xornimo taam ah la na mideeyo goboladda soomaaliyeed ee gacanta gumeysiga ku jira. Ururkani waxaa salka u dhigay dhallinyaradda oo kala ah :-
Xuska sanad-guurada 57-aad ee ciidamada xoogga dalka oo Muqdisho ka dhacday
HalgankiiXissbigaSYL – Aragti suubban iyo eray suugaan – Waxaa la yiri: “Sabool, xoolihiisu waxay u dhammaadaan, hantiile is ka gad!” is xushmee, balse, ha is xoolatirin, saa boolxufto iyo xifaaltan aadan geli Karin, lagu ma xoor beelee. Xigmad ma ahan, xusaska aan xisaabta lahayn, ee sida joogtada ah loo qabto, haddana, mid walbaa, uu qarash badan iyo ku baxo lacago aan tiro yarayn.
Hadda, habmalyada, xuska, xusuusta iyo weynaynta maalinta 12.04. ma naga mudan tahay, in aan qarash ku bixinno iyo lacago badan maamuuskeeda, anaga oo og baahida, diifta, darxumada iyo dayaca haysta CXD?
Dalkaan waa Beec : Shalay Badda, iyo Webiga Maantana Dekadaha Berbara, Boosaaso iyo Hishiiska Dalka Imaaraatka Carabta : DF oo Ethiopia ,iyo Kenya ku wareejisay Biyo Xireenkii BAARDHEERE
Shalay Badda, iyo Webiga Maantana Dekadaha Berbara, Boosaaso iyo Hishiiska Dalka Imaaraatka Carabta : DF oo Ethiopia ,iyo Kenya ku wareejisay Biyo Xireenkii BAARDHEERE
Muqdisho (Africorruption Online) – Waxay ahayd sanadkii 1980, markii dowladdii hore aay ku soo saartay FAAFIN RASMI AH L. 4 & Law #7 r 2 ee 25 feb. 1980, (Halkan Riix) mashruucii Biyo Xireenka Baardheere (Bardheere Dam Project).
Mashruucaas oo la dhameeyay daraasaadkii lagu sameeyay, waxaa maalgeliyay Bankiga Adduunka (World Bank). Heshiiska mashruucan ayaa waxaa kala saxiixday wasiirkii Qorsheynta Axmed Xabiib Axmed iyo Bankiga Adduunka. Mashruucan oo loo qoondeeyay in ay ku baxdo adduun dhan (lix boqol oo milyuun oo dollar – $600,000,000) kaa soo bilowday dhismihiisa Bishii Maarso 1986, Halkan Ka Akhri. Waxaa loo sameeyay wasaarad gaar ah oo lagu magacaabi jiray Wasaaradda Dooxada Jubba, oo uu wasiir ka ahaa Mudana Axmed Xabiib Axmed, nasiib darro intii uu socday dhismihiisa ayaa waxaa bilowday dagaalkii sokeeya oo markaa keenay in uu baaba’o mashruucii biyo xireenka Baardheere. Read the rest of this entry →
Sunday, April 9th, 2017 – Inta aanan ka waramin nooca nidaam-dowladeed ee ku haboon dalkeenna Soomaaliya ee ay waayadani qataraha badani kaga soo fool leeyihiin Shisheeyaha isugu jira cadaanka iyo madowga ee u soo qalabqaatay boobka kheyraadkeena. Aan marka hore ka hadlo labo arimood oo aad u muhiimsan, Kuwaasi oo kala ah: Canbaareyn aan u jeedinayo Baarlamaanka Federaaliga oo si indho la’aan ah u ansixyey xukuumad tiro badan oo aan loo baahneyn, iyo soo gudbin ku aaddan halbeegga aan Anigu wax ku cabiro marka aan wax taxliilinayo.
Qaabka loo dhisay xukuumaddani, Ayaa waxa uu muujinayaa in shanta sanam (Daarood, Hawiye, Dir, Digil iyo Mirifle iyo Beesha shanaad) ee wax lagu qeybsada ee ka jira dalkeenna ay wali yihiin kuwa xooggan oo aan laga gudbin karin, Kuwaasi oo ay ku qaraabtaan kuw xun xun ee ku jira bulshadeenna ee qabiilka u isticmaala aalad ay xilal ku qabtaan iyo waliba farsamo ay dhaqaalo ku uruursadaan. Sow ceeb ma’ahan in 17 sano ka dib ay dadka qaar wali ka hadlayaan hab-qeybsiga loo yaqaanno 4.5-ka ee baadilka ah ? Read the rest of this entry →